14 askari oo Ukraine laga dilay - BBC Somali
14 askari oo Ukraine laga dilay
22 Maajo 2014
Image caption askari katirsan ciidamada Ukraine
Weerar ka dhacay subaxii hore bar kontarool oo kutaalaa bariga Ukraine ayay ku dhinteen ugu yaraan 14 askari. Waxaana uu noqonayaa weerarkii ugu dhimashada badnaa ee soo wajaha ciidamada dawlada Ukraine ilaa iyo hada.
Malayshiyo aad u hubaysan ayaa weerarka kagaysatay bar-kontorool meel udhaw deegaan-ka Volnovakha, wuxuuna kamid yahay afar weerar oo habenimadii lagasoo sheegay bariga Ukraine.
Macada cidii gaysatay weerar kaasi ka dhacay kontorol-ka, mid kamid ah saraakiisha Ukraine ayaa BBC-da u sheegay in aysan weerarkasi ka dambaynin qolyaha gooni ugosad-ka ah.
Weerarku waxaa uu dhacay saddex bari kahor dorashada Madaxwayne nimada Ukraine. Rai'sal wasaaraha kumeel gaadh-ka ah ee Ukraine Arseny Yatseniuk, waxaa uu Golaha Amaan-ka ee Qaramada Midoobay ugu baaqay inay qabtaan kulan dagdag ah. Wuxuuna sheegay in uu hayo cadaymo muujinaya in Ruush-ku ay ku lug leeyihiin rabshadaha.
Ruush-ku waxaa ay u muuqdaan in ay ciidamadooda ay kala baxayaan xad-ka ay la wadaagaan Ukraine, si ay hoos ugu dhigaan walaaca laga qabo in ciidamadoodu ay farogalin sameeyaan sidii Crimea ay ugu sameeyeen bishii March.
Hogaamiyaha Nato Andres Fogh waxaa uu barta tuwiiter-ka ku sheegay in dhaqdhaqaaqa ciidamada Ruush-ku qaarkood ay ka wadaan Xadka ay u muuqdaan kuwo ka baxaya.
Madaxwaynaha Ruush-ka Vladimir Putin waxaa todobaad-kan bilowgiisii uu ku amray ciidamada u dhaw xad-ka inay kusoo laabtaan saldhigyadooda. Wariyahu waxaa u leeyahay hadii lagasoo saaro ciidamadaas oo lagu qiyaasayo afartan-kun in arintaasi ay gacan kagaystan doonto dagitaan-ka xaaladda Ukraine.
Dadka Ukraine waxaa ay axada u dareerayaan doorashada Madaxwayne cusub, doorashadaasina waxaa lagu dhawaaqay kadib markii madaxwaynihii u dambeeyay ee la doortay xilka laga tuuray bishii February iyada oo uu la kulmay dibadbaxyo waawayn oo lagagsoo horjeeday siyaasadiisa Ruush-ka u janjeedhay.
Dadka deegaan-ku waxaa ay wakaalada warar-ka ee AFP u sheegeen in dadka weerarka gaystay ay adegsaden gaadhi xamul ah oo dadan kaas oo ciidamada Ukraine oo aan shaki ka qabin ay gacmaha u wadhfiyeen, kadibna xabado lagagasoo furay. Wariyaha BBC-da oo goobtii uu shilku kadhacay booqay wxaa uu sheegay in ciidamada Ukraine ay diideen in wax laga duubo goob-taasi. Hosbitaal ay booqatayna waxaa ay ku aragtay 27 qof oo dhaawac ah.